Tag: kutengesa mharidzo | Martech Zone
Tag: kutengesa mharidzo
Kana iwe uri sangano hombe rinoshanda pamusoro pematanho mazhinji, uine maitiro akareruka etimu yako yekutengesa kuti uwane nekupa mharidzo dzakakodzera, mashandisiro emakesi uye rumwe ruzivo rwakakosha kukurumidza uye kugona kwekutengesa. Qvidian inoshevedza iyi Salesbookbook. Qvidian Sales Playbook ibhuku-rinotungamirwa rinotengeswa repuratifomu, rakabatanidzwa neSalesforce.com, iro rinobatsira vatungamiriri vekutengesa nekushambadzira kugadzirisa uye nekusimbisa maitiro ekutengesa kwekambani kukurumidza kukura kwebhizinesi uye
Ini handina chokwadi nezve chero nyanzvi yekutengesa iyo isina kumbomira pamberi peboka revanhu kana yakakosha boardroom chete kuti ive nenyaya nehurukuro yavo ichishanda. Slidedog inotarisira kupedza izvi nekupa iyo application inovaka yako Powerpoints, maPDF, mharidzo dzePrezi, mabhaisikopo uye kunyange mapeji ewebhu mune yekushandisa isingabvumirwe iwe yaunogona kutamba kubva kuUSB drive nayo! Iwe hauchafanirwe kunetseka nezve kubatanidza, kushandura kweshanduro, kana kunyangwe